बैशाख २५, २०७८ मध्य नेपाल संवाददाता
पर्सामा उपचारको क्रममा थप ३ जनाको मृत्यु भएको छ ।
वीरगंजस्थित नारायणी अस्पतालमा उपचाररत बारा जिल्लाका २ जना र रौतहटका एकजनागरी ३ जनाको मृत्यु भएको नारायणी अस्पतालले जनाएको छ । मृत्यु हुनेमा बुधबार भर्ना भएका बाराका ४५ वर्षिय पुरुष र वैशाख ८ गते भर्ना भएर उपचाररत रहेका सिमरा वडा नम्बर २ बाराकै ५५ वर्षिय पुरुष रहेका छन् ।
त्यसैगरी रौतहट सिर्सियाका ५५ वर्षिय पुरुषको समेत उपचारको क्रममा मृत्यु भएको नारायणी अस्पतालका कोभिड संयोजक डा. सरोजरोशन दासले जानकारी गराएको छ । तीनैजना कोरोना संक्रमित भई गम्भिर प्रकारको निमुनियाको उपचार हुदाँ हुदैँ मृत्यु भएको संयोजक डा. दासले बताए ।
यता पर्सामा पछिल्लो २४ घण्टामा १ सय ४५ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । पर्सा, बारा, सर्लाहीलगायतका जिल्लाबाट आएका २ सय ८८ जनाको थ्रोट स्वाबलाई अस्पतालको प्रयोगशालामा आटी(पिसिआर प्रविधि मार्फत परिक्षण गर्दा ९ जना एन्टीजेनसहित १ सय ४५ जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो ।
सङ्क्रमित हुनेमा ९ वर्षिय बालकदेखी ८८ वर्षका वृध समेत रहेका छन् । ति मध्ये ४५ जना महिलासहित पर्साका १ सय ५जना, बाराका २७, रौतहटका ८, सर्लाहीका ४ र महोत्तरीका १ जना रहेका छन् ।
#कोरोना कहर #कोरोना भाइरस
शनिवार, बैशाख २५, २०७८, ०४:०५:००
तेस्रो चरणको कोरोना महामारीका लागी उद्योग बाणिज्य संघले बनायो बाल संघन चिकित्सा इकाई
प्रसौनी गाउँपालिकाले बाल हेल्पलाइनलाई निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्ने ।
बालीमा बिषादी प्रयोगले दिर्घकालिन क्षति
महिलाका लागि सुरक्षित माध्यम उज्यालो वीरगन्ज अभियान अध्याँरो गल्लीमा बत्ती बलेको खण्डमा धेरै महिलाको सुरक्षा हुन्छ ।
बजेट निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता, चुनौती र पहुँच बजेट निमार्ण गर्दा जहिले पनि देशको समय परिस्थिति अनुसारको बनाउनु पर्छ ।